मलाई याद छ? वेबसाइट कुकिज
बिहीबार, सेप्टेम्बर 16, 2010 मङ्गलबार, अप्रिल 1, 2014 निक कार्टर
म नाम संग भयानक छु। म तपाईको कुकीलाई मेरो दिमागमा स्थापना गर्न सक्दछु ताकि प्रत्येक चोटि मैले तपाईलाई सार्वजनिक रुपमा देख्नु पछाडि याद भयो। मलाई लाग्छ कि यो एउटा तरिका हो कि मानवहरू भन्दा कम्प्युटरहरू बढी "बुद्धिमान" छन्। तर, मेरो यो स्पष्ट कमजोरीको कारण, म धेरै प्रभावित छु जब अरुले सजिलैसँग मलाई एक अवसरको सामना पछि सम्झन सक्छन्। यो एक कला हो। के तपाईंलाई थाहा छ? मलाई प्रभावित गर्दैन: जब व्यक्तिहरु यसलाई नक्कली। यो मेरो चर्चमा सबै साधारण हो, जहाँ सबै जना नाम ट्याग लगाउँदछन्। निस्सन्देह, attend०० जनाको साथमा, त्यहाँ मेरो आँखाको सम्पर्क पुन: प्राप्त गर्नु र "हाय, निक!" भन्नु भन्दा पहिले मेरो छातीमा धेरै संक्षिप्त झलकहरू छन्। एक चित्रित मुस्कान संग। म अप्रभावित छु।
अब, मानव दिमागको माथि उल्लिखित सीमितताहरूको साथ, यो पूर्ण रूपमा माफ गरीएको छ कि मेरा सँगी सभासद्हरूले मेरो नाम याद गर्दैनन्। त्यसोभए के बहाना छैन? जब एक कम्प्युटर सक्दैन। टेक्नोलोजी यसमा असफल हुन वेबसाइटहरूको लागि मानिसहरूलाई सम्झनको लागि काम गर्न धेरै नै सजिलो छ। जे होस्, धेरै अझै गर्छन्। र सबैभन्दा खराब भनेको के हो, यो वास्तवमै हो अझ बढी निराशाजनक जब कुनै वेबसाइटले मलाई सम्झन सक्दैन जब एक व्यक्तिले सक्दैन भन्दा भन्दा
पहिले, सबैको मनपर्ने होस्ट लिनुहोस् (वा, कम्तिमा होस्टिंग विज्ञापनहरू) GoDaddy.
म एक GoDaddy ग्राहक हुँ। म धेरै बर्ष भएको छ। र, म उनीहरू भ्रमण गर्दा मेरो नाम सम्झन को कती राम्रो। प्रत्येक चोटि जब म GoDaddy.com मा नयाँ सत्र सुरु गर्छु, मलाई स्वागत छ "स्वागत छ, निकोलस।" उनीहरूले मलाई भन्दछन् कि मसँग केहि डोमेन पनि समयावधि समाप्त भैरहेको छ, र केहि डीलहरू प्रस्ताव गर्दछु जुन (मेरो लाग्छ) मेरो खरीद व्यवहारको आधारमा चयन गरिएको छ।
राम्रो काम ... लगभग। यो सत्य हो, तिनीहरूले मेरो नाम याद गरे। तर, परिणाम स्वरूप उनीहरूले मलाई कुनै फरक व्यवहार गरेनन्। मैले वास्तवमा यो गुनासोको साथ GoDaddy लेखेको छु: जब म देखाउँछु, तपाईं मलाई यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ जस्तो म ग्राहक छैन। नेभिगेसन सबै पूर्व बिक्री सामग्री हो। यदि म मेरो डोमेनहरू, मेरो होस्ट गरिएका साइटहरू, मेरो खाता, आदिमा जान चाहान्छु भने मैले के गर्नु पर्छ अनुमान गर्नुहोस्: “तपाईं होईन” लिंक क्लिक गर्नुहोस् र नयाँ लग इन गर्नुहोस्। कुन, जे भए पनि, समान पृष्ठमा नयाँ लगइन फारम प्रदर्शन गर्दैन। होईन, यो नयाँ पृष्ठमा लाइभ हाइपरलिंक छ जुन लोड गर्नुपर्नेछ।
अब, म जानकारीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यकताको प्रशंसा गर्न सक्दछु जसमा लग-इन आवश्यक हुन्छ। र, वास्तवमा, म खुशी छु कि उनीहरूले त्यसो गरे। यद्यपि LinkedIn तपाईंलाई सम्झने को एक उत्तम तरीका पत्ता लगाउन को लागी प्रबंधित छ-साँच्चै तपाइँलाई सम्झँदै – र अझै अझै सुरक्षाको लागि लगइन पछाडि सुरक्षित हुनुपर्ने कुरालाई।
जब म लिंक्डइन डॉट कॉममा आइपुग्छु, मँ एक दर्ता गरिएको प्रयोगकर्ता हो भनेर विचार गर्दा मैले आशा गर्ने सबै कुरा देख्न सक्छु र तिनीहरूले वास्तवमा मलाई सम्झन्छन्। म निर्बाध रूपमा नेभिगेट गर्न सक्दछु। यो एक गलत सम्झना होईन। जहाँसम्म, यदि मैले पोष्ट गर्न, अपडेट गर्ने वा कुनै डाटा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरें, तिनीहरूले मलाई छिटो लग-इन संवादमा अवरोध गरे, जुन वास्तवमा मेरो प्रयोगकर्ता नाम याद छ। त्यसोभए, केवल एउटा द्रुत फिल्ड भर्न, हिट इन्टर गर्नुहोस्, र म सिमलेस गर्न जारी राख्छु।
म पनि आफ्नै ग्राहकहरु सम्झना गर्न राम्रो प्राप्त गर्न को लागी काम गरीरहेको छु। मेरोमा साइट, हामी एक लामो समय को लागी ग्राहकहरु सम्झना को प्रस्ताव गर्दै छौं। बक्स जाँच गर्नुहोस् र हामी तपाईंको लागि लग-इन प्रमाणपत्रहरू सम्झना गर्नेछौं। तर, भर्खर मैले मेरो साथीबाट नयाँ चाल सिके म्याक ईर्नहार्ड तपाईंले रोजगार दिन चाहानु सक्नुहुन्छ। यदि कसैको सत्रको समयावधि सकियो भने, वा यदि उनीहरूले पहिले लग इन गर्न आवश्यक लिंकमा भ्रमण गरे भने उनीहरूलाई लगइन स्क्रिनमा लात हान्नु भन्दा अघि, उनीहरू गन्तव्यको साथ सत्र चल भण्डार गर्नुहोस्। त्यसो भए, सफल लगईन पछि, तिनीहरू पुनःनिर्देशित हुन्छन् जहाँ तिनीहरू जान चाहान्थे। (धन्यबाद, म्याक)
तपाइँको साइटलाई आगन्तुकहरूलाई सम्झना कसरी सेट गर्ने भनेर जान्ने उत्तम तरिका भनेको आफैलाई बारम्बार आगन्तुक बनाउनु हो। तपाईंको ग्राहकहरूको रूपमा साइट प्रयोग गर्नुहोस्, के काम गर्छ र के गर्दैन भनेर हेर्नुहोस्। म कल्पना गर्न सक्दिन कि GoDaddy स्टाफले वास्तवमै उनीहरूको आफ्नै डोमेन प्रयोग गर्न आफ्नै वेबसाइट प्रयोग गर्दछ - सम्भवतः कारण उनीहरूको निराशाजनक प्रक्रिया बेवास्ता भएको छ। लिंक्डइन, अर्कोतर्फ, सायद आफ्नै उपकरणको साथ धेरै सक्रिय छ। के तपाईं आफ्नो ग्राहकहरुका जुत्तामा हिडनुहुन्छ? सम्झनुहोस् कि यो कस्तो छ बिर्सिएको जस्तो लाग्छ।
10 चीजहरू तपाईंको एजेन्सी छुटेको छ कि तपाईंको व्यवसाय लाई दुख दिन जारी छ
पूर्ण रूपमा सहमत, निक! GoDaddy लाई मन पराउनु बाहेक, जो उद्योगमा सेवाको एक सब भन्दा ढिलो शर्तहरू छ।
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि उनीहरूको TOS लाई शिथिल छ, मेरो पढ्नुहोस्। गीश, यो अचम्मको कुरा हो कि कोही मबाट किन्छन्। (ओहो, त्यो बाहिरको थियो)
उनीहरूसँग समस्या यो हो कि उनीहरूले मूल रूपमा कुनै पनि कानुनी कागजपत्र बिना तपाईंको डोमेन लिन सक्छन्। Nodaddy.com पढ्नुहोस् व्यवसायमा डराउने केही कथाहरूको लागि जुन तिनीहरूको डोमेन नाम बिनाकारण हरायो।